युगसम्बाद साप्ताहिक - स्रोत नभएर हैन सोच नभएर गरीब
Tuesday, 03.06.2018, 02:42pm (GMT+5.5)
नेपाल गरीब हो कि गरीब बनाइएको हो ? नेपाल सम्पन्न हुनसक्ने मुलुक हो कि हैन ? यो प्रश्न यो पुस्ताले हजुरबा पुस्तादेखिका राजनीतिक नेताहरुलाई सोध्ने गर्दछन् । चार दशकअघि नेपाल धानचामल निर्यात गर्ने मुलुक थियो । विकासक्षेत्रपिच्छे राइस मिल खुलेका थिए । अहिले नेपाल चामल आयात गर्ने र अनुदानमा खाने मुलुक बनेको छ । एसियामी जलविद्युत उत्पादन गर्ने अग्रणी मुलुक हो तर एक शताब्दी पूरा भैसक्दा एक हजार मेघावाट पनि विद्युत उत्पादन छैन । भारतबाट आयात गरेर भारवहन गरिएको छ । भएका उद्योगधन्दा निजीकरण र उदारीकरणको नाममा बेचिए, भारतको एकलौटी बजार बन्यो । व्यापार घाटा चौपट छ युवा निर्यात गरेर बस्तु आयात भैरहेको छ । नेपालको अहिलेको दुरावस्थामा पुग्नको कारण स्रोत नभएर हैन, सोच नभएर हो ।
नेपाललाई अपार स्रोत–साधन प्रकृतिले दिएको छ, तर हामी ती स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । विकास र समृद्धिका कुरा केवल नारा मात्र बनिरहेकोमा नेपालीहरु दशैंको रमझममा मस्त रहेका बेला मुलुकका दुई ठूला वामपन्थी पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेलसंगै पार्टी एकता गर्ने लिखित सहमति गरेपछि माहोल एकाएक बदलिएको थियो । सहमतिसंगै एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेर प्रदेश र संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याए । अहिले बामसरकार बनेको छ र यसले छिट्टै पूर्णता पाउनेछ । अब आम जनताको भावनाको कदरसहित इमान्दार, योग्य र जनमुखी छवि बनाएकाहरुलाई मन्त्री बनाएर घोषणापत्रमा दावी गरिए जस्तै समृद्धिको दिशातिर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि नेताहरुले त्याग देखाउनैपर्छ ।
किनभने समृद्धि, सुशासन, स्थिरता र विकासको नारा घन्काएर उनीहरुले चुनाव जितेका हुन् । जनताले त्यही आशमा भोट दिएका हुन् । यदि विगतकै जस्तो कुर्सी प्राप्ति र तेरो र मेरोमै समय खर्चिने हो भने जनमतको घोर अपमान मात्र हुने छैन कालान्तरमा एकीकृत पार्टीले ठूलो घाटा सहनुपर्नेछ । नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान सरकारले गरेका केही गल्तीको दण्ड जसरी जनताले दिए त्यस्तै गति अबको पाँच वर्षपछि यिनीहरुको पनि हुनेछ । यही तथ्यलाई मनन् गरेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।
यो देशमा योग्यहरुको कमी छैन, कमी छ त योग्य देख्ने आँखाको । आफ्नो नजिकको भए जो पनि योग्य र अर्कोको भए योग्य पनि अयोग्य देख्ने परिपाटीले गर्दा देशको समृद्धिमा योगदान दिने निकायमा विज्ञ हैन पार्टीका कार्यकर्ता लगिए । कार्यकर्ता पनि कस्ता लगिए भने देश र जनताको कामभन्दा नेताको निर्देशन बढी पालना गर्ने लगिए । यसको परिणाम विकास निर्माणको काम शुन्य । अब यो अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ र यही विश्वासका साथ जनताले बाम गठबन्धनलाई प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन् । यो बहुमतको कदर उनीहरुले गर्नैपर्छ । मन्त्री बनाउँदा, नियुक्ति गर्दा भागवण्डा हैन योग्यता र क्षमता हेरेर गर्नुपर्दछ । विज्ञता छ भने जसलाई पनि मन्त्री बनाउँदा फरक पर्दैन । आफ्नै पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर त्यसका लागि चाहिन्छ त्यागी भावना ।
अर्को महत्वपूर्ण वैदेशिक सम्बन्ध विशेष गरी भारत र चीनसंगको सम्बन्ध समदूरीमा राखेर लैजानु एकीकृत पार्टी र सो पार्टी नेतृत्व सरकारको ठूलो चुनौति हो । निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएदेखि नै भारतीयहरुमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भारतलाई छाडेर चीनतिर लाग्ने प्रचार गर्दैआएका छन् । केपी ओली न भारततिर न चीनतिर प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालतिर हुनुपर्छ । नेपालको दीर्घकालीन र बहुआयामिक हितका लागि उनले आफूलाई सच्चा देशभक्त सावित गर्दै दुबै मुलुकको विश्वास जितेर नेपाल र नेपालीको हितमा सहयोग र लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले कम्युनिष्ट भन्नासाथ चीनतिर र ‘प्रजातन्त्रवादी’ भन्नासाथ भारततिर नजिक हुने भन्ने गलत मान्यता चिर्नुपर्दछ । यो सरकार पाँच वर्षसम्म चल्ने हुनाले यसले लिने निर्णय र सुरु गर्ने विकास आयोजनाहरु मुलुकको दीर्घकालीन महत्वका हुनेमा विमती छैन । यसर्थ सरकार संचालनका लागि आफ्नो मान्छे हैन राम्रा र क्षमतावान मान्छे चयन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नेताहरुले त्याग गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले केपी ओली देस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । ओली निर्वाचनपूर्व नै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित भैसक्नुभएको थियो । उहाँमाथि आमजनताको ठूलो अपेक्षा थियो र छ । पहिलोपक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले देखाएको विकास र समृद्धिको सपना, अनि राष्ट्रिय स्वाभीमानको रक्षार्थ राखेको अडान आम नेपालीका लागि गर्वको विषय बन्यो । भलै यो विषय कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मनपरेन । ओलीको विकास योजना हावादारी ठाने, ओलीको राष्ट्रियतावादी सोच ‘महेन्द्रवादी चिन्तन’ माने । तर, जनताले तिनै ओलीलाई रुचाए ।
अब ओली प्रधानमन्त्री बनेर आफ्नो सपना पूरा गर्ने मैदानमा पुग्नुभएको छ । प्रचण्ड बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । त्यसैले काम गर्न सजिलो छ र कामगर्ने टोली सही भयो भने त्यो सम्भव छ । ओलीले देखाएको विकासको सपना पूरा गर्नु सानोतिनो त्यागले पुग्दैन । ओली एक्लैको त्याग र सक्रियताले मात्रै पनि त्यो पूरा हुँदैन । ओलीको समृद्धिरुपी रथ हाँक्ने त्यस्तै सारथि चाहिन्छ । समृद्धि र विकास महाभारतको रणमैदान हो र यसमा युद्ध जित्ने सारथि श्रीकृष्णजस्तै हुनुपर्छ ।